5 Fikrado la Keeno Si Looga Hayo Weerarada Kalluumeysiga & Khasaaraha; Concert Concert Concerns
Ereyga 'phishing' waxaa loola jeedaa hababka loo isticmaalo dambiilayaasha internetka si ay ula socdaan khiyaamo iyo / ama u helaan macluumaadka kaararka deynta, macluumaadka bangiga, sirta, ama macluumaad kale oo muhiim ah. Waa nooc ka mid ah xatooyada aqoonsiga, waxayna horay u soo saartay da'da internetka (khiyaamo phishing ah oo loo isticmaalo in lagu maamulo taleefanka, tusaale ahaan).
Seddexdii bilood ee ugu horreeyay ee 2016, waxaa jiray weeraro badan oo khadka tooska ah oo loo adeegsan karo marka loo eego marxaladda kale ee taariikhda, ugu yaraan sida laga soo xigtay APWG (Group Working Working Group). Sidaa daraadeed waa dhibaato aad u weyn, markasta oo caddayntu waxay muujineysaa in kaliya ay sii xumaaneyso - travelling gadgets.
Cybercriminals iyo kootaroolayaasha xaasidnimo ayaa markasta raadinaya calaamado sahlan. Inta badan ma aha, dhibanayaasha waxay u muuqdaan inay ku dhow yihiin iskaa-wax-u-qabso iyaga oo jaahil ah. Si kastaba ha noqotee, hubaysan oo leh farsamo yar yar oo farsamo iyo isdabajoog ah, waa sahlan tahay in laga hortago nidaamyada phishing.
Maamulaha Guusha Macaamiilka Sare , Oliver King, wuxuu sharaxayaa shan shuruuc oo fudud 'si loo hubiyo in adiga iyo ururkiinnaba aan lagu dhiban nidaamyada khiyaamaynta khayaanada.
1. Fiiri HTTPS iyo 'Lock' icon
Haddii URL ah bogga shabakadda (taas oo macnaheedu yahay "Locator Locator" habka) wuxuu ku bilaabmaa https: // (Qodobka Xawilida Qalabka Gaarsiinta) oo uu leeyahay astaanta calaamadaha cinwaanka cinwaanka cinwaanka, ka dibna waxaad taqaanaa ammaan iyo ammaan. Waa in aanad marnaba u gudbin wax macluumaad ah oo xasaasi ah goobta oo aan lahayn labadan waxyaalood oo muhiim ah.
2. Ka digtoonow WiFi
Marna ha samayn bangigaaga internetka, furo xisaabtaada PayPal, ama gali ereyada kale ee lambarka internetka markaad isticmaaleysid dadweynaha WiFi..In kasta oo xaqiiqda ah in internetka bilaashka ah ee suuqa ganacsiga, maktabad, garoonka diyaaradaha ama goobaha kale ee dadwaynuhu ay aad u habboon yihiin, kuwani waa gebi ahaanba meelaha ugu dambeeyay ee dembiilayaasha internetka sida la isticmaalo. Maxaa ka badan, adoo caawimaad ka helaya VPN (Virtual Private3 Network) uma baahnid in aad noqotid khariidad ereyga ah si aad ula xidhiidho macluumaadka shabakadda. Haddii aad ubaahan tahay macluumaadkaaga ilaalinta sirta ah meelahaas, waxaad isticmaali kartaa qalabka casriga ama kiniiniga 3 / 4G ama LTE.
3. Xidhiidhada la soo gaabiyey Waalidku waa shaki
Nooc kasta oo gaaban waa in lagu eegaa shaki ku jiro, gaar ahaan FaceBook. On Twitter, waxay macno u leedahay in ay isticmaalaan codka gaaban maxaa yeelay waxaa jira xad u gaar ah 140 xaraf kasta boostada, laakiin on goobaha kale, isticmaalka xiriirka gaaban oo la yareeyo bit.ly ama barnaamij kale oo gaaban yahay waa dullig. Waxay u badan tahay olole firfircoon oo baahsan oo laga yaabo in uu kaa tago si aad u xun oo khatarta ah.
4. Faallooyin iyo Ingiriisi jaban
Tani waxay caddaynaysaa in ay ku dhowdahay xittaa wax qiimo leh. Waa arrin la yaab leh inkasta oo qaar badan oo ka mid ah hawlaha ugu badan ee farsamooyinka casriga ah ee Shiinaha, Hindiya, iyo Ruushku aanay wakhti qaadan si ay u xalliyaan xirfadahooda qorista Ingiriisiga. Haddii ay jiraan calaamado muuqda iyo / ama salaan qosol leh ("Gacaliye Macaamiil ah", iwm) oo ku jira khadad mawduuc e-mail, ka dibna ku kalsoonow dareenkaaga oo aad tirtirto.
Mar labaad, waxaa laga yaabaa in xogta macdanta xirfadlayaasha ah ay si ula kac ah ugu baashaalaan nuquladooda naxdinta leh, sababtoo ah waxaa jira warar sheegaya in Cutubka 61798 ee Dawlada Shiinaha (google iyaga loogu talagalay akhrisyo xiiso leh) ay soo diraan emailada dhabta ah ee muuqda oo muuqda kadibna dib u fadhiiso wadada iyaga oo furaya.
5. Wax walbaa waa mid deg deg ah
Sanadkii 2014, eBay dukaanka iibsaday oo dhan ayaa ku booriyay dhammaan dadka isticmaala inay beddelaan furaha ereyada ah sida ay ku ogaadeen inay jabiyeen xog qarin.
Si kastaba ha ahaatee, tani waa mid gaar ah, si kastaba ha ahaatee, runta ayaa ah in noocyada noocan ah digniinta code ee casriga ah ay tahay calaamad muujinaysa phishing. Markaa laba jeer ka fikir intaadan ka jawaabin digniin degdeg ah. Xitaa waxaad dooni kartaa inaad la xiriirto taageerada macaamiisha si loo xaqiijiyo sheegashadaas.